Ungangeni kumnyango ozimeleyo wesitrato / kufutshane neChunxi Road Taikoo Li TV Tower / ibhedi yoqobo yevenkile kunye nesidlo sakusasa / Zuoshe
Indlu ekumhlaba osikelwe izindlu yonke sinombuki zindwendwe onguZizi
Iindonga ezimhlophe ezicocekileyo zihambelana nefenitshala yeplanga kunye nefenitshala, kwaye unokuncoma iintlobo ngeentlobo zezityalo ezifakwe emanzini kwindawo elula yomoya welog. Imizobo yeshawari yeMeteor kunye nezibane ezikhethekileyo zesitayile saseJapan zongeza umoya wobugcisa wendlu. Vula ifestile ukuze uzive ummandla owenziwe ngumthi, uhlale esihlalweni somthi, wenze iti kunye ne-classic ceramic set, iphunga elimnandi elinomoya wendalo, kwaye ujabulele ubomi bokuzimela ezintabeni.
[Zuo She] Inomnyango ozimeleyo okhululekileyo, okhululekileyo nokhawulezayo ozimeleyo, ungaphakathi kwesangqa esingaphakathi kumbindi wesixeko saseChengdu, ecaleni komlambo iJinjiang, kufutshane neLiving Water Park, Chenghua Park, kunye neMengzhuwan Swimming Pool. Amava anzulu obomi baseChengdu yakudala. Igumbi lixhotyiswe nge-air-conditioning ephakathi, iTV, iketile yombane, ifriji encinci, umatshini wokuhlamba, i-induction cooker, isithethi seBluetooth, intsimbi yombane, isomisi seenwele, ikiti yoncedo lokuqala, ishaja yefowuni, i-IKEA yomgangatho ophezulu we-mattress, umqamelo ophantsi, duvet, Japanese olurhwetywe zokuhlamba Linda. Free amanzi ezimbiwa, Coke, iti, Swiss olurhwetywe coffee philisi ... venkile Okuninzi ingqalelo inkonzo ingqalelo ukuba bakuzisele amava Homestay obutofotofo ...
Iindonga ezimhlophe ezicocekileyo zihambelana nefenitshala yeplanga kunye nefenitshala, kwaye unokuncoma iintlobo ngeentlobo zezityalo ezifakwe emanzini kwindawo elula yomoya welog. Imizobo yeshawari yeMeteor kunye nezibane ezikhethekileyo zesitayile saseJapan zongeza umoya wobugcisa wendlu. Vula ifestile ukuze uzive ummandla owenziwe ngumthi, uhlale esihlalweni somthi, wenze iti kunye ne-classic ceramic set, iphunga…
I-Cable TV, I-King bed, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ibhedi elala umntu omnye, I-Cable TV, Umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu
Ezinot ezibalulekileyo ngaseLwandle
4.88 (iingxelo zokuhlola 88)
Ngaphantsi kweemitha ezili-100 kude yiPaki yaManzi eLiving kunye nePaki yaseChenghua, apho unokujima khona, uhambe okanye udlale kusasa. Kukho ichibi lokuqubha eMengchai Bay ngaphesheya kwesitrato, apho unokuqubha ngaphakathi nangaphandle, ibhola yomnyazi, intenetya yetafile, kunye ne-badminton. Uhambo lwemizuzu esibhozo ukuya kwiTV Tower 339 Ode ukuya kwiJoy Complex, iivenkile ezithengisayo, iivenkile zokutyela, iikhefi, iibhari kunye nemiboniso bhanyabhanya.
Umgama ukusuka eChengdu Shuangliu International Airport
imizuzu eyi-38 ngemoto xa indlela ingaxakekanga
Umbuki zindwendwe ngu- Zizi
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Chengdu